Umbuzo noma ngabe itiye eliluhlaza ukhulelwe, usenayo impendulo ecacile. Naphezu kweqiniso lokuthi itiye eliluhlaza kubhekwa isiphuzo emangalisayo ekwelapheni ezingaba ucime ukoma, abacwaningi abaningi banomuzwa wokuthi itiye eliluhlaza ngesikhathi sokukhulelwa kungaletha hhayi kuphela inzuzo, kodwa umonakalo. Ngokuhamba nophenyo kwenziwe eziningi zocwaningo, liye kungase kutholakale ukuthi itiye eliluhlaza ngesikhathi sokukhulelwa esiphazamisayo ukumuncwa egcwele i-folic acid eziqukethwe eziningi kwemikhiqizo zokwelapha senzelwe omama abakhulelwe. Folic acid kuyinto izinto ezibalulekile ezidingekayo ukuze ukuthuthukiswa egcwele ezingenzeka embungwini, ikakhulukazi senyanga 1st. Imphumelelo folate okuqukethwe ingase ithuthukise ukukhubazeka ahlukahlukene azalwa nako. Ukuhlukunyezwa lesi siphuzo kungaholela ngeziphambeko ukuthuthukiswa neural tube.
itiye Green ngesikhathi sokukhulelwa kumele zisetshenziswe ngoba, njenganoma iyiphi enye iziphuzo energy, iqukethe caffeine. Owesifazane okhulelwe emithonjeni ehlukene kufanele kube usuku ukuthola mg hhayi ngaphezulu kuka-200 caffeine. Njengoba kungenzeka ngenxa imiphumela tonic ka theobromine caffeine kwabesifazane abakhulelwe baye banda kwenhliziyo kanye ukwanda kokutheleleka kudlange kakhulu ingcindezi, okungase kuthinte kakhulu kwezempilo jikelele. Ukweqisa izidakamizwa caffeine ingabagulisa toxicosis. Isimanga ukuthi kungase kuzwakale, kodwa ngezinye izikhathi green tea kwehlisa umfutho wegazi, ngakho-ke asifanele hypotension. Ukuhlukunyezwa kwezinhlelo itiye eliluhlaza ngezinye izikhathi kukhona ukucasuka, ukuqwasha, futhi kungenzeka exacerbation izifo ezingamahlalakhona.
Lokhu itiye has a lot of izakhiwo ezinhle. Ngakho-ke kunomthelela ukuzinza kohlelo eziphathelene nenhliziyo ukunciphisa umfutho ophakeme wegazi, kuqinisa amasosha omzimba. itiye Green ngesikhathi sokukhulelwa lisiza ekulondolozeni amazinyo enempilo nezinsini omama esizayo. Kuyasiza ukuba kulondolozwe inqaba ithambo simiso emzimbeni. itiye Green iqukethe eziningi Antioxidants ukuthi umnikelo wokugcina empilweni yabesifazane.
itiye Green iqukethe e ngezithako zawo ezifana izakhi mkhondo ewusizo ezifana iron, ithusi, i-magnesium, i-zinc, i-potassium, i-iodine sasekhaya. Zinc iyincenye lebalulekile ngoba kwengane esiswini. Njengengxenye itiye eluhlaza iqukethe eziyinkimbinkimbi amavithamini: B, P, C, PP, K. nesifiso esinamandla isicanucanu ukuhlafuna amaqabunga omile of tea eluhlaza. ngokulinganisela isiphuzo kunomthelela ukwehlisa ushukela egazini.
Zonke lezi emangalisayo izakhiwo itiye eliluhlaza ukukhuluma esivuna ukusetshenziswa kwalo. Abesifazane abakhulelwe kungaba ukuphuza itiye eliluhlaza isamba 1-2 izinkomishi ngosuku. Ukweqiwa ezinjengalezi zinikela umzimba izakhi umama impilo ongakazalwa wengane ze limele.
Isikhathi esining impela, abesifazane abakhulelwe zisebenzisa ezihlukahlukene zezinkambi engamakhambi. Ngaphambi ukusetshenziswa i itiye herbal udinga qiniseka ukuthi uthole iseluleko udokotela wakho ohamba phambili. Naphezu kweqiniso lokuthi ulwazi olunembile ngemiphumela ukusetshenziswa herbal lincane kakhulu, abanye babo namanje ngokuvamile sisetshenziswa sokukhulelwa. Ngokwesibonelo, itiye chamomile ekukhulelweni kuthuthukisa umzimba insikazi magnesium ne-calcium, futhi ikhuthaza ukulala okuhle futhi uqede ukuvuvukala kwamalunga. Kodwa kufanele wazi ukuthi ukusetshenziswa okweqile itiye chamomile ngesikhathi sokukhulelwa kungabangela ukukhubazeka kanzima ukulimaza ngoba kungabangela usongo yisisu. itiye ezinjalo ingasetshenziswa isamba 1-2 izinkomishi ngosuku. Njenganoma iyiphi izidakamizwa, itiye herbal ngesikhathi sokukhulelwa kufanele lusetshenziswa ngokuqapha okukhulu.
22 Emaviki abakhulelwe: perturbations esiswini, usayizi fetus
Imizamo IsiZulu - Iyini? Imizamo: indlela push aphefumule
Silicone igrisi treadmill
Indlela yokwenza ingaphakathi "Igumbi lokulala-ophilayo '?
Nikandrova ezingwadule (Pskov esifundeni): umlando, nokuzwa